China Drum mhando yakapfura blast muchina fekitori uye vagadziri | TAA
Zvakanakira dhiramu rakapfura blast muchina
Yakavimbika nenyunje Technology: Drum yakapfura blast michinazvinogadzirwa mumhando dzakasiyana dzakasiyana, mhando uye saizi. Iwo macompact uye anongova nekatsika kadiki kwazvo. Kuenderera mberi kubudikidza kunogona kuwanikwa nekubatanidza akati wandei michina.
Kugadziriswa-kwakanaka-kwehukama.Kugara uchigadzirisa kwakakosha pakuchengetedza kukosha kwenguva refu kwemidziyo. Yakakura sevhisi uye yekuongorora masuo anopa nyore kuwana kune ese akakosha zvikamu. Nekuda kweizvozvo, zvipfeko zvekupfeka zvinogona kutsiviwa nyore kwazvo.
Inovandudza Filter Tekinoroji:Iyo yekuvandudza firita system inonakidza neakakwira kuita. Chinhu chinonyanya kufadza chimiro iwo maconical filter cartridges ayo anogona kutsiviwa nekukurumidza uye nyore nyore kunze kwemuchina nekuda kwesiraidhi yavo mune michina. Aya macartridge-based firita masisitimu anogona kudzoreredzwa kunyangwe kune ekare epfuti blast michina yeanenge ese mamwe vagadziri.
Dhizaini Yakasimba: Iyo dhizaini yakasimba yakagadzirwa nesimbi inopfeka-isingagadzirike ine yakawedzera lining yenzvimbo dzakafumurwa kupfeka inotsigira anoshanda kuchengetedza yake mari.
* Huwandu hwenhengo dzekupfeka hwakadzikiswa zvakanyanya (zvichienzaniswa nesimbi-bhandi kupfura mabhureki michina) nekuda kwehunhu hwakakosha hwedhiramu.
* Iyo yakapfava swinging yekufamba uye kutenderera kwedhiramu inogonesa iyo nyoro kurapwa kwezvikamu.
* Dhizaini yedhiramu zvinoenderana nezvikamu zvekurapwa.
Chimiro uye dhizaini yenzvimbo yepasi uye madziro epadivi anovimbisa kuwira kwakakwana kwezvikamu.
* Kuwedzeredzwa kwedhiramu kunoonekwa zvinoenderana nezvinodiwa c uye hasha. Izvi zvinodzivirira kumisidzana, uye hasha inogona kuburitswa zvakakwana.
* Drum yakapfura blast machina anonyanya kushandiswa pakurapa zvidiki-zvakagadzirwa zvikamu.
Drum yakapfura blast michina anowanikwa mune anotevera mwero saizi:
Zvekugadzira Magadzirirwo TS 0050 TS 0150 TS 0300 TS 0500
Drum vhoriyamu (1)
Yakakwira-performance turbine (huwandu)
Yakakwira-performance turbine (kW)
7.5 kusvika 15 kusvika 22 kusvika makumi matatu
Hasha kufambisa sikuruwa sikuruwa sikuruwa sikuruwa
Neshuwa chikuva pasina Ehe Ehe Ehe
Cartridge firita yuniti PF4-06 PF4-06 PF4-09 PF4-12
Zvimwe zvekuwedzera uye maficha zvinogoneka.
Pashure: Kukuya mavhiri FW-09 akateedzana
Zvadaro: Carbon simbi yakatemwa waya kupfura
Otomatiki bara nenyunje Machine
blast muchina Drum mhando
China Shot nenyunje Machine
Drum pena nenyunje muchina
MuDrum Shot Blast Machines
Inowanikwa Spare zvikamu zvemukati zvemukati zveCr-12%, 20%, 25% kana sekukumbira. Chigadzirwa Zvimiro Zvemberi & nesainzi chaiyo yekukanda Maitiro uye tekinoroji. Kubudirira kwepamusoro uye otomatiki single chiteshi kuomesa yekugadzira mutsara. Yakakosha yakakwirira chromium abrasion ichikanda simbi spare parts, inoumba maburi mune epamba indasitiri. Original Equipment Yakagadzirwa (OEM) zvikamu zviripo. Isu tinopawo ...